သူတို့ပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်စကား - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on October 29, 2011 at 12:35 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အောက်ပါစကားစုလေးများဟာ native speakers တွေပြောပုံလေးတွေပါ။ အသုံးများတာလေးတွေစုစည်းပေးထားပါတယ်။ ဒါလေးတွေကို ကိုယ့်စကားထဲထည့်ပြောနိုင်အောင် ကြိုးစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
I just have to stop off in the bathroom. တစ်နေရာရာကို ခဏတဖြုတ် အလည်သွားတယ်။ ခဏနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်နဲ့သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
Jeannie : Go ahead, but make it snappy, okay ?
တစ်ယောက်ယောက်ကို မြန်မြန်လုပ်နော်လို့ ပြောတဲ့စကား။
You should have heard the fuss my mom kicked up ! ပါးစပ်စက်သေနတ်ပစ်တယ် ပုံမျိုးပေါ့။
And could I havealong-sleeved jacket this time ? The short-sleeved ones are so babyish. ကလေးဆန်တယ်တဲ့။
Sorry, I am terrible with names ! နာမည်တွေအလွတ်မရတာ၊ မမှတ်မိတဲ့အခါမှာပြောတဲ့စကား။
If it's any consolation to you, she didn't get the job. သူအလုပ်မရတာပဲခပ်ကောင်းကောင်းပါ။
တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့မအောင်မြင်မှု၊ အခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ အားပေးစကားပြောတဲ့အနေနဲ့သုံးလေ့ရှိပါတယ်
I guess I'm grinning because Jeannie didn't holler very much forachange. အြော်ကီးဟစ်ကျယ်ပြောတယ်။
Hugh MacKendrick isareal slave driver. အင်မတန်တိကျသူ။ အလုပ်သမားပေါ်မညှာတတ်တဲ့သူဌေး။ သူငယ်ချင်းအုပ်စုထဲမှာ ဦးဆောင်သူ။
He's so cute that it'sashame he's not nicer. ရုပ်ကလေးသနားကမားနဲ့စိတ်ဓါတ်မကောင်းတာ သနားစရာပဲ။
I like to court her but she's out of my league I bet she would never date an ordinary guy like me.
မမှီတဲ့ပန်းပေါ့။ ကိုယ့်ထက်အဆင့်အတန်း၊ ရုပ်ရည် စသည်ဖြင့် မြင့်မားတဲ့သူ။
Oh, Shona. You are suchaparty pooper. ပွဲဖျက်တဲ့သူ။ သူများတွေပျော်ရွှင်နေတာကို ငြင်းခုန်၊ အတိုက်အခံလုပ်ပြီး ဖျက်စီးတတ်သူ။
You could if you put your mind to it. စိတ်ထည့်ထားမယ်။ အာရုံစိုက်ထားမယ်။
I thought it might brighten up my practices. ပိုကောင်းလာစေမယ်။ တိုးတက်လာစေမယ်။
Well, we're just starting out, so we foul up sometimes. ကနဦးခြေလှမ်း။ အစမ်းပျိုးကြည့်တာ။
Don't you needajacket or anything ? It's freezing out. အရမ်းအေးတယ်။
I did this by choice. တမင်ကိုလုပ်တာ။
If you keep working on it hard, I think you haveareal shot at it this year. . . အောင်မြင်တယ်။
..... maybe he just wants more people to fill out the audience, but I am dying to go. ဖြည့်တယ်။
You'd think I was planning to pull an all-nighter or something. မနက်ဖြန်ဖြေရမယ့်စာမေးပွဲကို ဒီညမအိပ်ဘဲအသည်းအသန်ကျက်သည်။
I don't want to gush or anything, -- but well, you are great. ရွှန်းရွှန်းဝေအောင်ပြောသည်။
You should come jam with us sometime. တစ်ခါတစ်လေ ငါတို့နဲ့လာပေါင်း/တွဲ သင့်တယ်။
Bye, Mom don't wait up. စောင့်မနေနဲ့။
Myles seemed to beabig hit with all the girls. စွံတယ်။ ပေါက်မြောက်အောင်မြင်တယ်။
I wasatotal wreck. စိတ်ရောလူရောပင်ပန်းသွားတယ်။ ဘုံးဘုံးလဲသွားတယ်။
I thought maybe you had an ulterior motive. ဖုံးကွယ်ထားသည့်စိတ်။ အတွင်းစိတ်/ ရည်ရွယ်ချက်။
Shona has an even better shot at winning first place, Aynsley, so you'd better be on your toes. အသင့်ပြင်ထားရမယ်။
Finally they nodded their heads in unison. တညီတညွတ်ထဲ။
Will you please stop channel-hopping ....... ရုပ်သံလိုင်းတွေကို ဟိုပြောင်းလိုက် ဒီပြောင်းလိုက်လုပ်တယ်။
In answer to her parents' worried questions, she confessed that she and Hugh had broken up. တုံ့ပြန်အဖြေပေးသည်။
Now that Hugh's available, she'll probably be all over him, trying to catch him on the rebound. စုံတွဲနှစ်ယောက်ဇာတ်လမ်းတစ်ခန်းရပ်ပြီးသွားလို့မကြာခင်မှာ တစ်ယောက်ယောက်က တခြားသူနဲ့ပြန်တွဲတဲ့အချိန်။
Vandals isanew teen club that just opened up. ဖွင့်တာမကြာသေးဘူး။
You're not much ofatalker, are you ? စကားများများပြောတတ်တဲ့လူတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ (အပြောသမား။ အလုပ်သမားမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ၌ါယ်နဲ့လည်းသုံးနိုင်သေးတယ်။)
Ok that's enough play-by-play, I don't want to know what happens next ! အသေးစိပ်တစ်ခုချင်းပြော။
I know I should have called you, but I guess my pride got in the way. လမ်းမှာခံနေတယ်။ မဖြစ်စေရန်တားဆီးထားတယ်။
Mary: Paul, I'm concerned about you.
Paul: Hey, don't spareathought for me; I'll be fine!
Permalink Reply by eiphyu on October 29, 2011 at 13:36
Permalink Reply by Master Learner on October 29, 2011 at 18:15
Permalink Reply by maymayhtay on October 29, 2011 at 20:44
Permalink Reply by Diamond on October 29, 2011 at 22:36
Permalink Reply by Kyaw Thiha on October 30, 2011 at 8:16
ွGood post , Thanks for it.
But I think ,for English Speaking more fluently, Listening skill is more important and more difficult.
In this site,I found no listening lessons (for eg. mp3 file).I think if we can listen clearly and understand, other parts will be easy.
Star MemberPermalink Reply by zar ni (My Way!) on October 30, 2011 at 8:36
I agree. Listening is very(very) important. For beginners to intermediate learner,
Permalink Reply by Thin Thin Yu on October 30, 2011 at 10:11
Permalink Reply by Ko Latt on October 30, 2011 at 11:35
Permalink Reply by Kyaw Thiha on October 30, 2011 at 13:54
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုဇာနည် အသုံးဝင်တဲ.ဆိုဒ်ကလေးတွေပါပဲ voa ကတော.ထုံးစံအတိုင်း Access deniedပဲပေါ. ပြသနာမရှိပါဘူး ၊ထုံးစံအတိုင်းပဲ ခွလိုက်လို.ရပါတယ် ၊ကျွန်တော် သိထားတဲ. တစ် ချို. ဆိုဒ် ကလေးတွေလည်းပြန် Share လိုက်ပါတယ်
http://http://www.effortlessenglish.libsyn.com/category/Conversation (ဒီကောင်က ကောင်းပါတယ် ဒါပေမယ်. ပိုက်ပိုက်တောင်းတယ် ၊ ဖရီးဆိုရင် ရ ပုဒ် လောက် ပဲရမယ် ၊ အဟောင်းတွေရှာ ဒေါင်းရင်တော.ရတယ်)
http://http://www.disneyenglish.com/EN/careers/disneyenglish-job-po... ဒီကောင်က ကာတွန်း ဗျ
http://http://www.eslyes.com/easydialogs/ ဒီကောင်က Beginner တွေအတွက် လွယ်လွယ်လေးတွေ
http://http://www.engvid.com/ ဒီကောင်မဆိုးဘူး ၊ memberတော.၀င်ရမယ်
http://http://www.lyrics.com/ သူက အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေ ဗျ
http://http://www.teacherphil.com/ ဒီကောင် အကြိုက်ဆုံး ပဲ ၊ နောင်လည်း ရှိပါသေးတယ် ၊ကွန်နက်ရှင်း ကောင်းဖို. တော.လိုတာပေါ. ကျွန်တော် ကွန်နက် ရှင်း က ဖုတ်လိုက် ဖုတ်လိုက် ရယ် ၊ အော် ပြီးတော . အဓိကကျတာရှိသေးတယ် ၊ youtube လေဗျာ အဲဒီမှာ လည်းအများကြီးမှ --- - အဲဒီတော. ကွန်နက်ရှင်း ကောင်း ဖို.ရယ် ၊ ပြီးတော. အရေးအကြီး ဆုံး နားစိုက်စိုက်ထောင် ဖို. ဘာလဲ )(Deep Listening) ဆိုလား ကျေးဇူးပါဗျာ
Permalink Reply by ayeayetint on October 30, 2011 at 21:29
Permalink Reply by Sue on October 31, 2011 at 8:11
Permalink Reply by 16ht9n2vl6ixc on October 31, 2011 at 9:41